Man City Oo Guuldaro Kala Baday Real Madrid, Guardiola Oo Marti & Minanba Ku Tumay Zidane Iyo Sky Blues Oo Siddeed Dhamaadka UCL U Soo Baxday. - Gool24.Net
Man City Oo Guuldaro Kala Baday Real Madrid, Guardiola Oo Marti & Minanba Ku Tumay Zidane Iyo Sky Blues Oo Siddeed Dhamaadka UCL U Soo Baxday.
Manchester City ayaa u soo baxday siddeed dhamaadka tartanka xiisaha badan ee UEFA Champions League kadib markii ay tartankan ka cidhibtirtay kooxda ugu taariikhda wayn UCL ee Real Madrid.
Manchester City ayaa awooday in ay marti iyo minanba ku garaacdo kooxda Zidane ee Real Madrid iyada oo Sky Blues guuldaro kale u xambaarisay Real Madrid.
Raheem Sterling ayaa dhaliyay goolka furitaanka Man City ee Real Madrid xaalada ku sii xumeeyay laakiin intii ayna aybtii hore dhamaan waxaa barbareeyay Karim Benzema balse qalad labaad oo uu sameeyay Varane ayaa Gabriel Jesus ka caawiyay in uu dhaliyo goolka labaad ee Man City.
Guardiola oo hore Real Madrid ugula soo xifiltamay Barcelona ayaa awooday in uu labada guriba ku garaaco Zidane taas oo macalinka reer France ku ah waji gabixii ugu waynaa ee waayihiisa tababaranimo ee Champions league.
Kaydka: Oleksandr Zinchenko, John Stones, Taylor Harwood-Bellis, Eric Garcia, Tommy Doyle, Adrian Bernabe, Cole Palmer, Nicolas Otamendi, Claudio Bravo, Bernardo Silva, David Silva, Riyad Mahrez.
Kaydka: Brahim Diaz, Javi Hernandez, Lucas Vazquez, Alphonse Areola, Marcelo, Vinicius Junior, Marco Asensio, Federico Valverde, Luka Jovic, Diego Altube, Nacho, Isco.
DAQIIQADII 9 AAD Man City ayaa markiiba keensatay goolkeeda furitaanka waxaana qalad xun oo uu sameeyay Raphael Varane ku ciqaabay Gabriel Jesus oo kubbad ka soo xoogay Varane ka hor intii aanu caawin u samayn Raheem Sterling oo goolkan ku dhaliyay kubbad uu ka dhex saaray lugaha Militao oo isku dayay in uu badbaadin sameeyo.
Ciyaarta ayaa noqotay 1-0 ay Man City culays wayn ku sii saartay Real Madrid oo markii horeba laga doonayay in ay ka soo kabsatu guuldaradii Bernabeu laakiin Real Madrid ayaa bilawday in ay dagaalanto balse Man City ayaa wali ahayd kooxda goolal kale laga filan karayay.
Daqiiqadii 16 aad Raheem Sterling ayaa ugu dhawaaday in uu dhaliyo goolkiisa labaad kadib markii uu difaaca Madrid soo jiidhay laakiin kubbadii ugu danbaysay ee uu goolka ku dhalin lahaa ayaa laga joojiyay.
DAQIIQADII 21 Karim Benzema ayaa fursadii ugu horaysay ee gool dhalineed waxa uu ku abuuray goolka Man City kadib markii uu kubbad ka farsamaystay Laporte laakiin goolhaye Ederson ayaa sameeyay badbaadin cajiib ah.
Hal daqiiqo kadib Eden Hazard ayaa kubbad joog hoose ku socotay waxa uu ku tijaabiyay goolhaye Ederson laakiin waxay noqotay mid uu si sahlan ku joojiyay waxaana la arkay ugu danbayn Madrid oo weerar ah.
DAQIIQADII 28 AAD Real Marid ayaa ciyaarta dib ugu soo laabtay kadib markii uu Karim Benzema si qurux badan u dhamaystiray kubbad caawin uu ka helay da’yarka Rodrygo wuxuuna ahaa gool madax ah oo uu Ederson ku fashilmay in uu joojiyo waxayna ciyaartu noqotay barbaro 1-1 ah balse Madrid looga sareeyo kulankii hore.
Daqiiqadii 42 aad goolhaye Courtois ayaa musiibo ku abuuri gaadhay kooxdiisa kadib markii uu si liidata kubbad u saaray laakiin Foden oo helay fursad cajiib ah ayaa ku dhawaaday in uu dhaliyo goolka labaad ee Man City.
Man City ayaa markale noqotay kooxda weerarka badan ku jirtay waxayna caawin badan ka helayeen is fahan la’aanta Varane, Militao iyo Courtois oo marar badan walwal ku abuurayay Zidane.
Si kastaba ha ahaatee, qaybtii hore ee ciyaarta ayaa lagu kala nastay barbaro 1-1 ah balse ay wadarta labada kulan Man City hogaanka ku haysay 3-2.
Markii layskugu soo laabtay qaybtii labaad ee ciyaarta ayay markale Man City soo laabtay iyada oo weerar ku ah goolka Madrid laakiin fursad khasaarinta City ayaa aad u badnayd iyada oo Raheem Sterling iyo De Bruyne ay markiiba lumiyeen fursado ay ciyaarta ku dili kareen.
Daqiiqadii 61 aad markii uu Zidane arkay xaalada kooxdiisa waxa uu kursiga kaydka uga yeedhay Marco Asensio wuxuuna saaray Rodrygo laakiin Guardiola ayaa dhawr daqiiqo kadib kaga jawaabay in uu ciyaarta soo galiyay Bernardo Silva wuxuuna saaray Poden.
DAQIIQADII 68 AAD Man City ayaa ugu danbayn keensatay goolkeeda laabad ee ay fursadaha badan u khasaarisay waxaana halkeeda ka sii socotay musiibada Rapahel Varane ee kulankan oo heer kala gaadhay kadib markii uu Gabriel Jesus ka caawiyay in uu dhaliyo goolka labaad ee City.
Varane ayaa isku dayay in uu kubbad u furto goolhaye Couritois laakiin Jesus ayaa awooday in uu ka gaadho wuxuuna sidaa ku dhaliyay goolka labaad ee uu ciyaarta kaga dhigay 2-1 ah City wadarta hogaanka kga dhigay 4-2.
Daqiiqadii 80 aad Guardiola ayaa saaray xidigii goolka furitaanka u dhaliyay ee Raheem Sterling wuuxuna kaydka ka soo kiciyay xidiga bixitaankiisa ay waqtiga koobani ka hadhsan tahay ee David Silva.
Daqiiqadii 82 aad Zidane ayaa hal mar saddex isbadal oo soo daahay sameeyay wuxuuna ciyaarta soo galiyay Lucas Vázquez, Luka Jović iyo Federico Valverde waxaana la saaray Dani Carvajal, Eden Hazard iyo Luka Modric.
Laakiin xiliga uu Zidane isbadaladan sameeyay waxay ahayd xili kooxdiisa niyada looga jabiyay goolka labaad iyo waliba kubbad haysasho ay fursad abuuris joogto ahi la socotay waxaana Zidane lagu dhaliilay sababta uu isbadaladan ula soo daahay.
Ugu danbayn ciyaarta ayaa ku dhamaatay 2-1 ay Man City guuldaro kale ku baday Real Madrid waxayna City awooday in ay marti iyo minanba ku garaacday Madrid iyada oo City xaqiijisatay booskeeda siddeed dhamaadka Champions League.
Kkkkkk kuwii lahaa real real real meeyeen caawa soo baxa dee idin aaway hhhhhhh kkkkkk